शरीरलाई भित्रैबाट शुद्धिकरण गरौं, बिषको भण्डार बन्न नदिऔं – Janaubhar
शरीरलाई भित्रैबाट शुद्धिकरण गरौं, बिषको भण्डार बन्न नदिऔं
प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ | 280 Views ||
अहिले वायुमण्डल नै दुषित छ । तपाईं र हामीले पलपल सास फेरिरहँदा धुलो,धूँवा, दुर्गन्धले फोक्सो भरिन्छ । पानी अशुद्ध छ । खासगरी प्लाष्टिकको जारमा राखिएको पानी सेवन गछौं, जसमा अनगिन्ती तर नदेखिने प्लाष्टिकको कण हुने अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । यस्तो पानीले हामी आँत भरिरहेका छौं । हामीले खाने सागसब्जी विषाक्त छ । विउँ,बिजन राख्नेदेखि त्यसलाई उमार्ने, फलाउने र भण्डारण गर्ने प्रक्रियामा हानिकारक रसायन प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसरी फलाइएका सागसब्जीले हाम्रो पेटलाई रोगी बनाइरहेको छ । हामी आफैले उत्पादन गरेको अन्नपातले पेट भर्ने होइन,बरु बजारमा आश्रित छौ । बजारमा उपलब्ध ती खाद्यपदार्थ बिशुद्ध, अग्र्यानिक छैनन ।
त्यस बाहेक हामी खाजा,नास्ताको रुपमा खाने,मम, चाउमिन,चाउचाउ, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, विस्कुट, चिप्स यी सबै कुरामा पोषकतत्व भन्दा बढी हानिकारक तत्व छन । यस्ता खानपानले हाम्रो शरीरलाई विषको भण्डार बनाइरहेको छ । स्वादको चक्करमा पोषणरहित खानपान आफ्नै खेतीबाली, आफ्नै सागसब्जी, आफ्नै फलफूल उत्पादन गरेर खाने चलन हराएको छ । चामल चाहियो, बजारमा पुग्छौं । सागसब्जी चाहियो, बजार चाहछांै । माछा, मासु, दही, दुध, घिउ, फलफूल, सागसब्जी सबै कुरा बजारबाट हाम्रो भान्सामा आइपुग्छ । र, यी अधिकांश खानेकुरा शुद्ध वा अग्र्यानिक हुन्छ भन्ने छैन ।
धेरैजसो खाद्यपदार्थ स्वादिलो त छ तर पोषणयुक्त छैन । त्यस मध्ये पनि कतिपय विषाक्त छन । यस्तो अवस्थामा शुद्ध र अग्र्यानिक खानपान हाम्रा लागि दुर्लभ बनेको छ । अर्कोतिर कमाई,करियरको चक्करमा हाम्रो जीवन अस्तव्यस्त छ । विहान उठेदेखि राती ओछ्यानमा पुग्दासम्म कामको तनावमा घेरिएका हुन्छौं । अर्थात आफ्नो खातिर हामीसँग कति पनि समय छैन । न योग गछौ न व्यायाम न त ध्यान ।
हामी यसैपनि सुविधाभोगी बन्दै छौं । पाँच मिनेटको बाटोमा पनि हामीलाई मोटरसाइकल चढ्नुपर्छ । कार्यालयमा होस वा घरमा, हामी बढी सुविधा खोजिरहेका हुन्छौं । ऐस,आराम खोजिरहेका हुन्छौं । अर्थात शरीर निक्रिय छ । एकातिर अशुद्ध खाने कुरा सेवन गरिरहेका छौं, अर्कोतिर सुविधाभोगी जीवन बिताइरहेका छौं । नतिजा,शरीर विषको भण्डार बन्दै छ । खाने कुराको माध्यामबाट शरीरमा विषालु तत्व त जम्दै छ नै, त्यसलाई शरीर बाहिर निकाल्नका लागि कुनै प्रयास गरिदैन् ।
यसैले त अहिले धेरैलाई दीर्घ रोगले गाँजेको छ । कोही उच्च रक्तचापले थलिएका छन कोही मधुमेहले । कसैलाई मुटुको रोगले गाँजेको छ, कसैलाई मिगौलाको । यस्तो अवस्थामा पुगेपछि त्यतिका दुःख गरेर कमाएको पैशाको के काम ? दिनरात नभनी जोडेको धनसम्पतिको के काम ?
भनिन्छ, तन्दुरुस्त र निरोगी शरीर आफैमा एक अनमोल उपहार हो । जबकी रोगी शरीरलाई एक पीडादायक अवस्थाको रुपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसैले स्वस्थ्य जीवनका लागि शरीरको शुद्धिकरण आवश्यक छ । शरीरको शुद्धिकरण कुनै शल्यक्रियाबाट हुँदैन,न त कुनै औषधीबाट नै । प्राकृतिक शैलीले यसको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि केही शर्त छन ।
मदिरा,चुरोट जस्ता सोझै हानि पु¥याउने पदार्थ पूर्णत त्याग गर्नुपर्छ । जंकफूड,रेष्टुरेन्टका खानेकुरा, मैदाजन्य परिकार, प्याकेट बन्द खाने कुरा, तारेको, भुटेको मसलेदार खाने कुरा सेवन गर्नै हुँदैन । संभव भएसम्म मासुजन्य परिकार खान नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
खानाका लागि समय निर्धारण गरौं । विहान,दिउसो, मध्यान्ह र साँझ केही न केही खाने तालिका बनाऔं । खाना सुपाच्य, पोषिलो र ताजा हुनैपर्छ ।
शारीरिक रुपमा सक्रिय र सफा रहने । विहान व्यायाम, योग, ध्यान गर्ने । प्राणायाम गर्ने ।
अब हामी आफ्नो शरीरलाई शुद्धिकरणको प्रक्रियामा लान सक्छौं । माथि उल्लेखित शर्तहरु पालना नगरी शरीर शुद्धिकरण गर्न संभव छैन वा शरीर शुद्धिकरणका लागि गरिने प्रयास एवं अभ्यासहरु प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
कसरी सुरु गर्ने शुद्धिकरण ?
सबैभन्दा आफ्नो जैविक र शारीरिक विष हटाउने । चिया,चुरोट, कफी, रिफाइन्ड खाने कुरा आदि त्याग्ने । दैनिक प्रयोग गरिने रासायनिक सामाग्री जस्तो कि क्लिन्जर, स्याम्पु आदि नियन्त्रण गर्ने । संभव भएसम्म प्राकृतिक उत्पादनमा जोड दिने ।तनावको स्थिती पनि एक समस्या हो, जसलाई आउन नदिने । यसले हाम्रो शरीरमा रहेको स्ट्रेस हर्मोन सिस्टम रिलिज गर्छ । यो हर्मोनले शरीरमा ‘एड्रेना लाईन रस’ बनाउन थाल्छ,
जसले शरीरमा विषाक्त पदार्थ फैलन्छ । तनाव नियन्त्रणका लागि योग एवं ध्यान सर्वोत्तम विकल्प हो ।
शुद्धिकरणको प्रक्रिया शुरु गरेपछि दुई दिनको उपवास बस्नुपर्छ । यद्यपि दुईदिन तरल पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । जुस, सुप, सर्वत आदि पिउन सकिन्छ । पाँच दिनसम्म एकदम सुपाच्य एवं हल्का खाना खानुपर्छ । खाना यस्तो होस,जसलाई पचाउनका लागि पाचनयन्त्रले कुनै भार उठाउन नपरोस् । विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्नका लागि तीन देखि सात दिनसम्म शुद्ध, ताजा फल र सब्जीको पेयपदार्थ सेवन गरौं । यस उपायबाट शरीरको विषालु पदार्थ निकाल्न सकिन्छ ।
यस्तो आहार र जीवनशैली अपनाऔं
१. फाइबरले भरपुर खानेकुरा खाने । जस्तो ब्राउन चामल र अग्र्यानिक विधीले उत्पादन गरिएको ताजा फल एवं सब्जी । मुला,चुकन्दर, बन्दागोभी, ब्रोकाउली आदि एकदम प्रभावकारी विषहरण आहार हो ।
२. कलेजोलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि ग्रीन टि, दुध जस्ता पोषकतत्व लिने ।
३. भिटामिन सि युक्त आहार लिने । यसले शरीरमा ग्लुटाथियोन उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । यसले कलेजोमा रहेको विषालु पदार्थ निकाल्छ ।
४.दिनभरमा कम्तीमा दुई लिटर पानी पिउनुपर्छ । पानी पिउँदा शरीरको अशुद्ध पदार्थ बाहिर निस्कन्छ
५.गहिरो सास लिने, यसले हाम्रो शरीरको सबै प्रणालीमा अक्सिजन राम्ररी पुग्छ ।
६.पाँच मिनेटका लागि एकदम अर्थात सहन सक्ने तातो पानीले हायड्रोथेरापीको अभ्यास गर्ने । त्यसपछि ३० सेकेन्डका लागि चिसो पानीले नुहाउने । यस प्रक्रिया तीन पटक गर्ने र फेरि आधा घण्टाका लागि बेडमा आराम गर्ने ।
७.व्यायाम गर्ने । सकेसम्म पसिना निकाल्ने । विहान एक घण्टा पूर्ण व्यायाम गर्ने,योग गर्ने, ध्यान र प्राणायाम गर्ने ।
Prevमाछा मार्ने परम्परागत विधिनै उत्तम
Nextजिल्ला पार्टी एकताको काम चाँडै टुंगिन्छ